PUBG မိုဘိုင်းဂိမ်းကစား | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » PUBG MOBILE
PUBG MOBILE APK ကို
PLAYERUNKNOWN'S စစ်မိုဘိုင်းဝင် -! မူရင်းတိုက်ပွဲ Royale ဂိမ်းသင့်ရဲ့ device ကို 1 အပေါ်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ မိုဘိုင်းပေါ်တွင်တရားဝင် PUBG
ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့်-ကြာ-အားလုံးဆုရှင်များအတွက် 100 ကီလိုမီတာကျွန်း×ဝေးလံခေါင်သီ 8 ပေါ်သို့ 8 ကစားသမားလေထီး။ ကစားသမားများနေရာချထားခြင်းနှင့်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကျုံ့ကစားဇုန်သို့ကစားသမားတွန်းအားပေးတဲ့အသေးစိတ်နှင့် Tactical ကြွယ်ဝသောစစ်မြေပြင်၌ရှိသောကစားသမားကိုအနိုင်ယူဖို့ရှိသည်။ , ဆင်းသက်ဖို့အဆင်သင့် Get များကိုလည်းသိမ်းယူနှင့်ရပ်နေသည်ကိုနောက်ဆုံးလူကိုရှင်သန်နှင့်ဖြစ်ကြာဘာပဲလုပ်ပေး!
အဆိုပါအစွမ်းထက် Unreal Engine ကို4ကြွယ်ဝသောအသေးစိတ်, လက်တွေ့ဂိမ်းဆိုးကျိုးများနှင့်တိုက်ပွဲ Royale များအတွက်ကြီးမားသော HD ကိုမြေပုံနှင့်အတူတစ်ဦးမေးရိုး-ကျဆင်းနေအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျက high-quality audio က, စွဲငြိဖွယ်ရာ 3D သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် 7.1 ရုပ်သံလိုင်း surround sound နှင့်အတူဆော့ကစားသကဲ့သို့သင်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အထူနေနဲ့တူခံစားကြရသည်။
3 ။ လက်တွေ့လက်နက်များ
လက်တွေ့ ballistics နှင့်ခရီးသွားဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်အတူလက်နက်ငယ်, Mele လက်နက်များနှင့် throwables ၏တစ်ဦးကအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာသေစေလောက်လက်နက်တိုက်သငျသညျ, shoot ဖြိုဖျက်သို့မဟုတ်သင့်ရန်သူ incinerate ဖို့ option ကိုပေးသည်။ Oh, နှင့်သင်ဒယ်အိုးသဘောကျတယ်? ကျနော်တို့ဒယ်အိုးရရှိပါသည်။
4 ။ စတိုင်အတွက်ခရီးသွား
ကားများ, ထရပ်ကားများ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်, သင်၏ရန်သူတို့ကိုနှိမ့်ချလိုက်ရှာပြဇာတ်ဇုန်မှသူတို့ကို Race သို့မဟုတ်လျင်မြန်သောထွက်ပေါက်စေရန်လှေအပါအဝင်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး Commandeer ။
5 ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့ Up ကို
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစစ်တိုက်ရှင်သန်။ Invite နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုအတူတက်အဖွဲ့စကားသံကိုချက်တင်အားဖြင့်သင်တို့၏စစ်တိုက်မည့်အစီအစဉ်ကိုသြဒိနိတ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကင်းတပ်ကို set up ။
6 ။ တရားမျှတသောဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်
အစွမ်းထက် Anti-cheat ယန္တရားများအားလုံး PUBG MOBILE ကစားသမားများအတွက်ပျော်စရာတရားမျှတတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အာမခံပါသည်။
မရင့်တစ်ဦးကဂိမ်း။ ဒါဟာတိုက်ပွဲ Royale ဖြစ်ပါတယ်။
* တစ် persistent အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
PUBG MOBILE ထဲကအများဆုံးရတဲ့အတှကျ * အကြံပြုကျန်တာတွေ: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 သို့မဟုတ်အထက်အနည်းဆုံး2GB ကို RAM က။
ဂလက်ဆီ NOTE500, Sony Xperia XZ8, ဂလက်ဆီ S1, Google PIXEL8, ဂလက်ဆီ NOTE2, Huawei HONOR5, LG က G8, Redmi 5A, Huawei P4, Sony Xperia X ကို, Redmi NOTE9: လက်ရှိ version ကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ,4+ Android ထုတ်ကုန်ထက်ပိုထောကျပံ့ ။
ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ဆဲအကြောင်းအရာအကောင်းဆုံးနှင့် features အသစ်ဖြည့်စွက်စောင့်ရှောက်မည်အဖြစ်လက်ရှိ version ကိုဂိမ်း၏နောက်ဆုံးရညျအသှေးကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။
သင်ကစားပွဲကိုခံစားခဲ့လျှင်, Facebook ပေါ်မှာဆွေးနွေး join ကျေးဇူးပြုပြီး! PUBG MOBILE တရားဝင် Facebook ကစာမျက်နှာ: http://www.facebook.com/PUBGMOBILE
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက PUBGMOBILE_CS@tencentgames.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
- Added ဖုတ်ကောင်: Dawn, ကစားသမား Resident Evil2ကနေဖုတ်ကောင်များနှင့်အကြီးအကဲတွေကိုစစ်တိုက်ခြင်းရှိရာအသစ်တစ်ခုကိုအချိန်ကန့်သတ်ဖြစ်ရပ် mode ကိုမှီတိုငျအောငျကျြောခ။
Vikendi မှလရောင်: - ရာသီဥတု Added ။
- Added ကစားသမား Spaces ။
- Added Resident Evil2main menu ကိုဆောင်ပုဒ်နှင့်ဂီတ။
- လျင်မြန်စွာပွဲစဉ် - Sanhok Arcade အတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
- အတိရလဒ်များကိုယခုမှသာ 1 တစ်လအထိထားရှိမည်နေကြသည်။
- ဘတ်ဂျက် device များအတွက်မြေပြင်အနေအထား display ကို bug တွေ Fixed ။
1.73 GB ကို
Ritik sedai says:
မေလ 25, 2019 မှာ 5: 50 နံနက်
Bablu Kumar က says:
မေလ 9, 2019 မှာ 10: 52 နံနက်
လူးဝစ် fer says:
ဇူလိုင်လ 14, 2019 မှာ 9: 07 ညနေ
မေလ 2, 2019 မှာ 9: 42 နံနက်